Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » I-China Breaking News » Abalingani beFinnair noJuneyao Air kumzila weHelsinki-Shanghai nangaphezulu
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • I-China Breaking News • I-Finland Breaking News • Izindaba • Unomthwalo wemfanelo • Ezokuvakasha • Inkulumo Yezokuvakasha • Transportation • Izimfihlo Zokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba Ezihlukahlukene
Amakhasimende aseFinnair azohlomula ngokuxhuma okuthuthukile kunethiwekhi yezindawo ezingama-57 eChina kusuka endaweni kaJuniyao eShanghai Pudong, futhi amakhasimende kaJuneyao azokuthokozela ukufinyelela okungcono kunethiwekhi ebanzi yezindawo ezingama-65 zaseFinnair ngezindawo zayo zaseHelsinki.
IFinnair noJuneyao Air bangena kubambiswano lwebhizinisi ngokuhlanganyela.
Abathwali ababili bazobambisana kwezohwebo ezindizeni eziphakathi kweHelsinki neShanghai.
IFinnair neJuneyao Air njengamanje basebenzisa izindiza ezi-2 ngesonto phakathi kweHelsinki neShanghai futhi zizokwandisa amaza ngokushesha uma isimo sobhadane sivumela.
IFinnair noJuniyao Air ezinze eShanghai bazongena kubambiswano lwebhizinisi elihlanganyelwe ngomhlaka 1 Julayi 2021, lapho abathwali ababili bezobambisana khona kwezentengiso ezindizeni eziphakathi kweHelsinki neShanghai kanye namaphuzu angaphaya kweChina neYurophu.
Finnair noJuneyao Air baqala ukubambisana kwe-codeshare ngoJulayi 2019, lapho UJuneyao Air yethule umzila wayo waseShanghai-Helsinki. Ibhizinisi elihlangene liqhubeka nokujulisa ukubambisana, linikeze amakhasimende ezinkampani nawokungcebeleka izinketho zemizila eguquguqukayo, imali yokugibela ekhangayo kanye nezinzuzo ezithuthukisiwe zamalungu amaflaya ajwayelekile. Amakhasimende akwaFinnair nakaJuneyao azohlomula kuzinqubomgomo ezingaguquguquki zamakhasimende ngokwesibonelo ngemali yesibonelelo semithwalo, ukunakekelwa kwamakhasimende okuhlanganisiwe kanye nenani eliphakeme lomklomelo wamapheshana ahamba phambili kuzindiza ezimbili.
IFinnair noJuneyao Air njengamanje basebenzisa izindiza ezi-2 ngesonto phakathi kweHelsinki neShanghai futhi babheke phambili ekwandiseni amaza ngokushesha lapho isimo sobhadane sivumela. Ngo-2019, iFinnair noJuneyao Air basebenza ngezindiza zansuku zonke phakathi kweHelsinki neShanghai.
"IFinnair imayelana nokunikeza ukuxhumana okuhle kakhulu phakathi kweYurophu neAsia", kusho uTopi Manner, oyiChief Executive Officer eFinnair. “Lokhu kungubambiswano lweqiniso lokuwina wonkana, oluzokwenza amakhasimende akwaFinnair noJuneyao bakwazi ukujabulela ukufinyelela okuthuthuke kakhulu kunethiwekhi yethu. Kubuye kufakazele ukuzibophezela kukaFinnair ngokuqinile eChina njengemakethe yamasu. Silangazelele ukusebenzisana nabangane bethu eJuneyao, sakhe ibhuloho eliqine kakhulu phakathi kweChina neYurophu ngezikhungo zethu zaseShanghai naseHelsinki. ”
“Sihloniphekile ukwenza lolu hlelo lubambisane neFinnair ukuze sinikeze amakhasimende ethu imikhiqizo ebanzi kanye nezinsizakalo ezisezingeni, sihlinzeke ngokukhetha izindiza okuguquguqukayo, kanye nokuhlangenwe nakho kokuhamba okungenamthungo. Ibhizinisi elihlanganyelwe neFinnair lizovumela iJuneyao Air ukuthi iqhubeke nokuqinisa imakethe yayo eYurophu, okuyisu elibalulekile ekukhuliseni kwethu umhlaba wonke njengoba inyusa kakhulu ubukhona bukaJuneyao Air emakethe yezindiza ebekelwe ukuba yilo 'othwala ngenani eliphezulu' ”, kusho inkampani. UZhao Hongliang, Isikhulu Esiphezulu kuJuneyao Air.
IJuneyao Air yethule umzila wayo osuka eShanghai uya eHelsinki ngoJulayi 2019, futhi kusukela lapho bobabili uFinnair noJuneyao bebelokhu bebelana ngamakhodi ngezinsizakalo zeHelsinki-Shanghai komunye nomunye nasezindizeni ezikhethiwe zokuxhuma ezisuka eHelsinki ziye eYurophu naseShanghai ziye kwezinye izindawo eChina. Isivumelwano sokuphindisela samalungu eFinnair Plus noJuneyao Air Club avame ukusetshenziswa futhi ngo-Agasti 2019, sivumela amakhasimende ukuthi athole futhi ahlenge amamayela namaphuzu kuyo yonke inethiwekhi yomlingani ngamunye.